Nekuuraya kwe internet-based mameseji ekutumira iripo nhasi, mumwe anogona kufunga kuti SMS yakafa, asi handizvo. Izvo zvichiri kubatsira pakutaurirana nevasiri-smartphone vashandisi kana kugamuchira zvigadziriso kubva kumakambani akadai sebhangi rako kana zvekushandisa sevashandi.
Netsika, kutumira mameseji kana SMS yaive yakachengeterwa nharembozha senge mbozhanhare yaive ne SIM kadhi. Nekudaro, pane nzira dzakasiyana dzaungashandisa kutumira nekutambira mameseji kubva mukombuta yako.
Kune vashandisi ve iPhone, zviri nyore kugamuchira mameseji pane Mac yako kuti usazombopotsa mese meseji yakakosha kunyangwe zvauri kuita. Nemidziyo yeAroid asi, iyo Windows Messages desktop app inoita kuti zvive nyore kutumira uye kugamuchira mameseji kubva kuPC yako.
Chii chinonzi Android Messages?
Mameseji epaMahara chinhu chemahara kutumira chishandiso chakagadzirirwa Android zvigadzirwa zvinokubvumira kutaura, kutumira mameseji, kutumira midhiya mafaira senge mafoto, mameseji ekuteerera, mavhidhiyo, uye kutumira zvinyorwa zveboka.
Inoshanda zvakanyanya WhatsApp yewebhu, zvine maficha awungawane mumeseji yakawanda yekutumira mameseji semaGIF, emojis, tsvimbo, asi zvinotoenda zvakanyanya kukubvumira kutumira kana kugamuchira mubhadharo kuburikidza neGoogle Pay.
Izvi zvese zvinobatsira iwe kuchengetedza nguva yaungazopedzera kuprinta uchishandisa social media kana mafoto nemavhidhiyo apo iwe unogona kungotumira SMS dzinokurumidza. Kwete izvozvo chete, asi zvakare zvinobvumidza iwe kuti utore mharidzo refu pane keyboard uye uzvitumire zvakananga kubva kuPC yako.
Mune ino gasi, tinokuratidza mashandisiro aungaita Meseji yeApple kuna batanidza chako Android mudziyo nePC yako, kuitira kuti ugone kuona, kutevedzera, kutumira uye / kana kugamuchira mameseji eGoogle pane desktop yako PC.
Mashandisiro Ekushandisa Iyo Android Messages Desktop Mutengi PaPC Yako
Iyo Android Messages desktop app kana Android Message yeWebhu inobvumira vashandisi kutumira uye kugamuchira mameseji musereji pakati peavo smartphone nePC. Kutanga, kurodha Android Messages kubva kuGoogle Play Store, uye uiise pane yako smartphone.
Vhura iyo app pafoni yako uye tap Gadza Sezvo Default chat chinyorwa.
Kana wagara uine default App pamwe zvamunopiwa mashoko ako akadai Samsung kuti Messages Anwendung, unogona kuwana abuda kuyambira kuzivisa kuti kuita kwako chokukuvadza vamwe Anwendung inoratidza kana iwe kuisa Android Mashoko sezvo default wako. Bata Ehe kuratidza kuti iwe unoda kushandura iyo messaging app kuAndrew Messages.
Mameseji epaGoogle anoenderana neese ako meseji akachengetedzwa uye kutaura, uye uchaona bhuruu Kutanga Chat bubble pazasi kurudyi ruoko rwekrini, iwe raunogona kukanzura kuti utange kutumira mameseji.
Tevere, gadza maMessage eGoogle pane desktop yako desktop kana laptop nekuvhura iyo Webhusaiti yeMessage yeGoogle muwebhu browser. Inoshanda nechero browser.
Enda kune yako Android foni uye uvhure iyo Android Messages app. Tinya katatu dots kumusoro kumusoro kurudyi rwechiso kuvhura menyu.
pombi Mharidzo yewebhu. Izvi zvinobatanidza foni yako kumasevhisi uye zvinobva zvangogadzira mameseji ako kuti iwe ugovaona nenzira imwechete yaungaita neyavo yakajairika messaging app interface.
chitsamba: Unogona kuchinja mutsauko kubva pachiedza kuenda kune rima mode nekutora Gonesa theme yerima kana iwe uchida kushaya ziso rakatetepa mune rakadzika mwenje zvigadziriso.
Iyo interface ichashandura kune yakasviba mode theme seinoratidzwa mumufananidzo uri pasi apa.
Tinya bhuruu QR kodhi scanner bhatani.
Tarisa iyo QR kodhi pane yeGoogle Messages webhusaiti paPC yako.
Paunongotarisa kodhi yeQR, Meseji yeGoogle inotakura uye kuoneka muwebhu browser yako, uye unogona kutanga kutaurirana nevako vaunosangana navo, uye nekugovana mavhidhiyo, meseji yezwi, mafoto uye zvimwe zvinhu zveapp paPC yako.
Iwe unogona zvakare kusarudza imwe yega mameseji, ona zviri mukati mayo uye nekupindura nekunyora mubhokisi rezvinyorwa pazasi mese meseji. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti Android Messages inoshanda kana foni yako yadzimwa uye yakabatana neinternet.
chitsamba: Kana iwe ukavhara iyo Android Messages webhusaiti kubva kunebrowser yako paPC, iwe unofanirwa kutora kodhi itsva QR kodhi kutumira meseji kana mhinduro uchishandisa iyo Android Messages desktop desktop zvakare. Izvi zvinodaro nekuti nekushomeka, iyo Rangarira iyi komputa sarudzo yakaremara, asi iwe unogona kuigonesa kana iwe uchishuvira kushandisa iyo app kutumira kana kugamuchira mameseji paPC yako.
Ungatanga Sei Kukurukurirana Kana Kupindura Nemashoko eAndrew paPC
Kuti utange kukurukurirana kutsva, baya bhuruu Kutanga Chat bhatani riri kumusoro kuruboshwe rwechidzitiro, uye nyora zita romugamuchiri, nhamba yefoni, kana email kero.
Iwe unogonazve kupindura kune meseji nekudzvanya pairi meseji yemanyorero zorodzo kuvhura rwonzi rwekutaura, nyora mhinduro yako, uye tinya bhatani reSMS kurudyi pazasi pechiso.
Kunge mamwe mameseji ekutumira mameseji, unogona wedzera emoji, tsvimbo, maGIF uye zvimwe zvinongedzo, uye kana yako smartphone iri kaviri-SIM chishandiso, unogona kusarudza iyo SIM kadhi kutumira iyo meseji kana mhinduro kubva.
The Settings Nzvimbo inokubvumira kuti uchinje meseji yako yekutarisa kana kurongedza chiziviso, vaviri kana kusagadzikana PC yako uye smartphone, tamba kurira kwemashoko ari kuuya, kutsiva emoticons ne emojis kana uchinyorera, uye kuratidza apo foni yako iri kushandisa mobile data, nezvimwe zvakawanda.
mwe zvinhu zviripo neApple Message desktop app inosanganisira kuchinja matanho ekukurukurirana kana kuvhura iyo yakafashukira menyu kuti uwane mamwe sarudzo.
Iine smartphone app, unogona kuwedzera kana vhara vatambi kubva pane zvigadziriso menyu, uye shandisa iyo Smart Reply chishandiso chekuwana otomatiki mazano ekupindura kumeseji uye kuzvitumira kune vako vanokushamwaridzana. Iyo ine zvakare mamwe mameseji uye ekuzivisa mameseji iwe aunogona kushandisa.
Wakamboshandisa Android Messages desktop desktop pane PC yako here? Govana chiitiko chako nesu nekudonha kupindura kwako pazasi. Kana ino inguva yako yekutanga kuishandisa, isu tinodawo kunzwa kana gwara iri rakakubatsira kumisikidza lokusebenza pane yako smartphone uye PC, uye zvaunofungidzira kwekutanga kwazviri.